नमस्कार फर्काउने कि? :: खुविराम खनाल :: Setopati
नमस्कार फर्काउने कि?
मिति २०७९ जेठ १९ गते सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकाका प्रकाशित नमस्कार गर्ने कि? भन्ने शीर्षकको लेख पढ्दा नमस्कार सम्बन्धमा केही लेख्‍न कलम चलाउँदै छु।
हो मेरो जीवन भोगाइमा धेरै पटक भोगेको छु कि नमस्कार नगर्नेमात्र होइन अरूले नमस्कार गर्दा समेत नफर्काउने!
कुरा २०५९ सालको हो। भर्खर एसएलसी सकाएर महेन्द्र रत्‍न क्याम्पस, ताहाचल काठमाडौंमा क्याम्पस लेभलको पढाइको लागि भर्ना भएको थिएँ।
त्यस समयमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक परेकाले म मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थिएँ। सो कार्यालयका प्रमुखसँग भेट हुँदा नमस्कार गरें तर त्यसको प्रतिउत्तर आएन। सोपश्चात त्यस्ता धेरै महानुभावसँग सो नियति भोगिरहेको छु।
यहाँसम्मकी सेवाग्राहीको नमस्कार फर्काउने त परैको कुरा आफ्नो कार्यालयका आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले गरेको नमस्कार समेत नफर्काउने!
हो, त्यस्ता महानुभावहरूलाई आज म यो लेखमार्फत् नमस्कारका सम्बन्धमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु।
नमस्कार एक अभिवादन गर्ने माध्यम हो। यसको प्रयोग कुनै व्यक्तिसँग भेट हुँदा र बिदाई हुँदा दुवै समयमा गरिन्छ। नमस्कार संस्कृत शब्दको नमः शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ हो प्रणाम गर्नु।
नमस्कार भन्दा एक व्यक्तिको आत्माले दोस्रो व्यक्तिको आत्मालाई अभिनन्दन गर्दछ।
यसरी एक व्यक्तिको आत्माले दोस्रो व्यक्तिको आत्मालाई अभिनन्दन गर्दा त्यसलाई नफर्काउने भनेको त्यो व्यक्तिको महानता हो त?
कसैले आफूलाई नमस्कार गर्दा नमस्कार गर्नेभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, आफ्नो अधिनस्त ठान्ने! उसमा कुनै पनि ज्ञान छैन र आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने अहंकार त्याग्नु आवश्यक छ।
राम्रो भावनाले गरिएको नमस्कारले दुवैमा स्वच्छ भावनाको विकास हुन्छ। जसले गर्दा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। यस प्रकार नमस्कार अध्यात्मिक र व्यवहारिक दुवै तरिकाले फाइदाजनक छ। यसले अन्य व्यक्तिप्रति नम्रता बढ्नुको साथै व्यक्तिको कृतज्ञताको भावना विकास हुन्छ।
जब कसैसँग भेट हुन्छ, हामी दुई हात जोडेर नमस्कार गर्छौं। आफन्त, इष्टमित्र, गुरू, अतिथि जो कोहीलाई पनि पहिलो भेटमा नमस्कार गर्छौं।
नमस्कार गर्नु हाम्रो संस्कार हो।
नमस्कार यस्तो चिज हो जुन दोहोरो रूपमा पाइन्छ। आफूले नमस्कार गरेमा आफूले पनि नमस्कार पाइन्छ। अगाडि पछाडि न हो। नमस्कार गर्दा कुनै घाटा हुने हुँदैन। बरू अर्को व्यक्तिसँगको सामिप्यता बढ्छ।
आज म निजामती कर्मचारी छु। मेरो अनुभवले के देखेको छु भने जब कुनै नागरिक सेवा लिन सार्वजनिक निकायमा आउँछ प्राय: सबै सेवाग्राहीले हामी सेवा प्रदान गर्न बसेका कर्मचारीहरूलाई नमस्कार गर्छ नै।
त्यो नमस्कार उसले हामीप्रति दर्साएको अभिनन्दन हो। प्रणाम हो। सकिन्छ सेवाग्राहीलाई देख्नेबित्तिकै सेवाप्रदायकले नै नमस्कार गरौं। नभए कमसेकम सेवाग्राहीले दर्साएको अभिनन्दनलाई सहर्ष स्वीकारौं।
आज हामी कुनै एक कार्यालयको पदमा बहाल रहेता पनि अर्को कार्यालयको लागि हामी सेवाग्राही नै हौं। हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि पद भनेको क्षणिक हो। पात्रहरू फेरिरहन्छन्। केवल हाम्रो व्यवहारले सेवाग्राहीमा परेको प्रभाव उसले आफ्नो जीवनकालसम्म सम्झिरहने छ। त्यो सम्झाइ सकारात्मक वा नकारात्मक बनाउने कुरा तपाईंको एउटा नमस्कारले निर्धारण गर्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २८, २०७९, १३:१०:००